गर्मी बढ्यो, शरीरलाई शीतलता दिन खानुहोस् यस्ता फलफूल ! - ज्ञानविज्ञान
यहाँ हामीले सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
Don't Miss it काँक्राले स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाहरु यस्ता छन् !
Up Next यस्ता खानेकुराहरु फ्रिजमा राख्ने गरेमा स्वास्थ्यलाई हुन्छ ठुलो हानी !
कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् ४ सजिला उपचार
गर्मी मौसममा अधिकांश मानिसको कुर्कुच्चा फुट्ने समस्या हुन्छ । कतिपयले कुर्कुच्चा फुट्यो भन्दै ढुंगामा रगेड्ने वा पानीमा भिजाएर धारिलो बस्तुले…
सफा अनुहार स्वस्थताको प्रतिक हो । तर अधिकांस मानिस अनुहारमा चायाँपोतोको समस्याले ग्रसित छन् । विशेषगरी गोरो छालामा चाया स्पष्ट…
कतै तपाईंमा यस्ता लक्षणहरु देखा परेको त छैन ? मृगौला खराब भएको हुनसक्छ
मानव शरिरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मध्ये मिर्गौला एक हो । मिर्गौला रोगका कारण नेपालमा वर्षौनी धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको…
हामीलाई कहिलेकाहिँ एकदमै थकान महसुस भइरहने, सुतिरहन मन गर्ने, आँखा नै खोल्न नसक्ने गरी निन्द्रा लागिरहने हुन सक्छ । घरमा…
कतै तपाईको हाँछ्यु रोक्ने बानी त छैन ? सावधान ! यस्ता घातक स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ
अहिलेको समयमा अधिकांशलाई सामान्य रुघाखोकी लागेको हुन्छ । रुघाखोकी लागेको बेलामा हाँछ्यु आउनु सामान्य पनि हो । तर के हाँछ्यु…